हाम्रा प्रधानमन्त्रीको आफूलाई मात्रै सर्वज्ञानी ठान्ने बानी का कारण अर्थमन्त्रीको असफलता मुल रुपमा प्रधानमन्त्रीको असफलता हो – Namaste Dainik
September 6, 2020 NamastedainikLeaveaComment on हाम्रा प्रधानमन्त्रीको आफूलाई मात्रै सर्वज्ञानी ठान्ने बानी का कारण अर्थमन्त्रीको असफलता मुल रुपमा प्रधानमन्त्रीको असफलता हो
नेपाल राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गएको, एकात्मकताबाट संघीयतामा गएको, जुन परिवर्तन आएको छ लोकतान्त्रिक परिवर्तन र अर्थतन्त्रको त्यहि ढङ्गले पुरानै सामन्ति, अर्धसामन्ति अर्थात, निर्वाहमुखी कृषि प्रधान अर्थतन्त्र थियो । त्यसलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न संरचनात्मक परिवर्तन चाहिन्छ, एक प्रकारले विशेष धक्का दिनुपर्छ । यसका लागि उपयुक्त बेला आएको थियो ।
केपी ओली नेतृत्वमा सुविधाप्राप्त जुन बहुमतको सरकार छ । त्यो सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरणको निम्ति धक्कामुलक ढङ्गले नीतिगत रुपमा क्षेत्रगत रुपमा प्राथमिकता किटान गरेर बजेट लगायतका नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको थिएँ ।
दुखःका साथ भन्नुपर्छ, उहाँले यतापट्टी ध्यान दिनुभएन । या त प्रधानमन्त्री लगायत पार्टीको कारणले गर्दा सक्नुभएन या उहाँ आफैंले चाहनु भएन वा बुझ्नु भएन ।
यो तीन वर्ष अर्थतन्त्र जुन ढङ्गले अगाडि बढाइयो, कुनै सकारात्मक परिवर्तन ल्याएन ।
हामीले संसदीय व्यवस्था अपनायौं । यसमा मुख्य भूमिका प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । त्यसले अर्थमन्त्रीले चाहेर मात्रै धेरै गर्न सक्दैन । तर गुणात्मक नभएपनि मात्रात्मक अन्तर गर्न सकिन्थ्यो । यस हिसावमा अर्थशास्त्रको प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो समय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका डा. खतिवडाबाट मान्छेले धेरै अपेक्षा गरे । म आफैंले पनि केही शंकासहित अपेक्षा गरेको थिएँ ।
किनकी विशुद्ध प्राविधिक मान्छेले हाम्रो जस्तो संक्रमणकालीन समाजको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न सक्दैन । अर्थ राजनीतिज्ञ पनि चाहिन्छ । उहाँ आफैं वामपन्थी पृष्ठभूमिको र कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि जोडिँदै आएको र अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति हुनाले उहाँले आफ्नो प्रावधिक दक्षताको समिश्रणबाट अरु भन्दा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ कि भन्ने अपेक्षा मैले गरेको थिएँ ।
उहाँले तीन वटा बजेट ल्याउनुभयो । पछिल्लो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया खासगरी गणतन्त्रपछि कसैलाई त्यो सुविधा प्राप्त भएको थिएन । त्यो अवसर उहाँले गुमाउनुभयो । उहाँबाट जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो पुरा हुन सकेन ।
उहाँलाई मात्रै दोष दिन चाहन्न । किनकी संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण नै प्रमुख हुन्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भिजनबिहीन हुनुहुन्छ, गफाडी शैली, आफूलाई मात्रै सर्वज्ञानी ठान्ने र अरुलाई नसुन्ने प्रवृति छ । त्यसले गरुडको छायाँ परेको सर्प जस्तो हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको छायाँमा परेर उहाँले प्रावधिक ज्ञानको पनि ठीक ढङ्गले प्रस्तुत हुन पाएन भन्ने लाग्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीको असफलता मुल रुपमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको असफलता हो ।
यद्यपि प्रावधिक ढङ्गले विशेषज्ञता प्राप्त अर्थमन्त्रीले पनि अलिकति पद चिन्ह छोड्न सक्नुपर्दथ्यो, त्यो भएन । अपेक्षा र देशको आवश्यकता अनुरुप काम गर्न सक्नुभएन ।
कोरोना रोकथामका लागि भनेर गरिएको लकडाउनमा मात्रै उपचार नपाएर ७३ जना सुत्केरीको ज्यान गयो